एञ्जेलिना जोलीलाई मन पराउँछन् अर्जुन - गसिप - साप्ताहिक
एञ्जेलिना जोलीलाई मन पराउँछन् अर्जुन
पछिल्लो नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो– अर्जुन पोख्रेल । विशेष गरेर चलचित्र संगीतमा अलि बढी चर्चामा रहेका अर्जुनका शब्द तथा संगीत दुबै चर्चामा छन् । त्यसो त उनी चलचित्रमा मात्रै संगीत गर्ने संगीतकार भने पक्कै होईनन् । उनका आधुनिक तथा लोक गीतका संगीत पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । धेरै महिलाको रोजाईमा पर्न सफल उनै संगीतका अर्जुनका मनपर्ने केहि महिला पात्रका बारेमा उनले साप्ताहिकसंग कुरा गरेका छन् ।
मनपर्ने अभिनेत्री : पूजा शर्मा
मनपर्ने गायिका : अञ्जु पन्त
मनपर्ने चरित्र अभिनेत्री : लक्ष्मी गिरी
मनपर्ने हास्य अभिनेत्री : कुञ्जना घिमिरे
मनपर्ने खेलाडी : संगीना वैद्य
मनपर्ने रंगकर्मी : दीया मास्के
मनपर्ने मोडल : आँचल शर्मा
मनपर्ने समाचारवाचिका : पूनम पौडेल
मनपर्ने बलिउड अभिनेत्री : दीपिका पादूकोण
मनपर्ने बलिउड गायिका : श्रेया घोषाल
मनपर्ने हलिउड अभिनेत्री : एञ्जेलिना जोली ।
प्रकाशित :कार्तिक ५, २०७४
के गर्दैछन् मिलन चाम्स ? आश्विन ६, २०७६
चलचित्र छाडेर अस्ट्रेलिया उड्दै अश्लेषा ? भाद्र २५, २०७६
साम्राज्ञीले छोडेको चलचित्रमा अब स्वस्तिमा भाद्र १२, २०७६
फ्लप चलचित्रमा मिरुनाको ह्याट्रिक भाद्र ६, २०७६
आशा गरिएकैबाट निराशा भाद्र ३, २०७६